-Enwe obi ike Ezé Gị na White Ezé | Best Way to whiten Ezé Guide
Ọtụtụ ndị na ogologo maka ezé di ọcha. E nwere a dịgasị iche iche nke omume i nwere ike ime iji hụ na gị ezé gaghị esi odo. E nwere ụzọ whiten ezé gị na-acha ọcha ọzọ. Isiokwu a na-agụnye iche iche Atụmatụ maka na-gị ezé na-acha ọcha ma na-edebe ha dị ọcha.
Jide n'aka gị ezé na-ịkpachapụ anya kpochara n'ihu iji home enwu gbaa nke ezé Usoro. Ezé whitening na ngwaahịa ga-rụọ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ị na-etinye ha na-adịrịrị ọcha teeth.If ezé gị na-adịghị ọcha mgbe ị whiten tupu brushing mgbe ahụ pụta ga-adị mkpumkpu shading.
Onye ọ bụla maara na citrus mkpụrụ osisi, dị ka oroma ma ọ bụ lemons, ndị ọgaranya na vitamin C, Ma, ị ma na ha nwere ike ime ka ị ezé acha ọcha? Ị pụrụ ọbụna iji a lemon bee ma ọ bụ oroma, niile i nwere ime bụ ete elu nke ezé gị megide azụ akụkụ, nke na-akpata ha na-egbuke egbuke. Site n'itinye a ntakịrị nnu na bee nke lemon ma ọ bụ oroma, ihe ga-esi a pụrụ imeziwanye emeziwanye.
The mbụ ihe dị mkpa mgbe na-agbalị ka ị na ezé na-acha ọcha bụ ọkachamara cleanings. Ina ezé gị kpochara ọ bụla ọnwa isii na mgbe niile ịtọọ oge gị eme n'ọdịnihu oru mgbe ị nọ n'ụlọ gị ugbu a ihicha.
Ndị a na ngwaahịa nwere Chemicals na n'iku ezé gị. The ahịhịa si roughness na-eme ka n'aka gị ezé dị ọcha.
Ọ bụrụ na-aṅụ ihe ọṅụṅụ soda, tii, kọfị ma ọ bụ ọchịchịrị wine, ịṅụ mmiri dị ka nke ọma. Ndị a darker ọṅụṅụ ga n'iku ezé gị, karịsịa ma ọ bụrụ na ha na-iwesa mgbe nile. Swishing sips nke mmiri gburugburu n'ọnụ gị n'etiti sips nke ndị a na-aba n'anya nwere ike inyere ewepụ ọ bụla fọduru nwere ike ịkpata staining. Mgbe ewe ndị a na-aba n'anya, cheta-asa ezé gị ozugbo o kwere omume.
A obere mara ụzọ iji nweta gị ezé ha whitest bụ iji mkpụrụ ụfọdụ. Otu di na nwunye ihe atụ nke magburu onwe mkpụrụ osisi nke nwere ike whiten Ezé oranges na oroma. Ị nwekwara ike-ete a oroma bee megide elu nke ezé gị na-whiten ha.
Ebu a miniature atu na i nwere ike iji mgbe eri shuga n'ókè. Ndị a ihe oriri ihe arapara ezé gị mfe, na-amalite na staining usoro ma ọ tụkwasịkwa ihe na ya. Mgbe n'imeso onwe gị na-atọ ụtọ, jiri obere oge ahịhịa. Ntacha eze na-adịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị na sikrob ezé gị na ahụ itucha ha nke ọma.
Gị okpueze ga-whiten ka ndị fọdụrụ n'ime gị ezé. Gị okpueze ga-anọgide n'otu dị ka ezé gị ga-esi acha ọcha. Nke a nwere ike ime ka okpueze kwụpụta ọbụna karịa tupu.
Gị mkpa iji gbochie ihe e dere ede buildup n'ihi na ọ pụrụ ime ka ezé gị na-discolored.
Na-a atu stowed pụọ ruo mgbe unu na-eri swiiti ma ọ bụ ndị ọzọ na ihe na ato uto. N'ihi na ndị a ihe oriri arapara ezé nnọọ mfe, ha nwere ike kwalite staining. Mgbe na-anụ ụtọ ihe na ato uto, abọ abụọ ma ọ bụ atọ nkeji. Ị adịghị ga-enwe ntacha eze, dị ka ogologo oge ị na sikrob ezé ọma na itucha ugboro na mmiri.
Organic aki oyibo mmanụ ike ga-eji dị ka a oké enwu gbaa gị n'ụlọnga maka gị teeth.If ị na-eji aki oyibo mmanụ dị ka a mouthwash, o nwere ike whiten ezé gị na banyere 10 nkeji kwa ụbọchị. Mgbe ihe 10 nkeji, itucha ọnụ gị si na ahịhịa dị ka ị ga-eme. I nwere ike ịhụ ụfọdụ na-arụpụta ihe na-erughị ụbọchị ole na ole.
-Asa ezé mgbe ọ bụla nri ga-enyere na-ha free si discoloring. Nke a dị oké mkpa mgbe ị na-aṅụ kọfị.
An organic aki oyibo mmanụ pụrụ ịbụ nnọọ tiketi ka whitening ezé gị. -Enye gị ezé a 10-nkeji kwa ụbọchị itucha na aki oyibo mmanụ nwere ike nwere oké mmetụta na whiteness nke ọnụ ọchị gị. Mgbe 10 nkeji agafeela, itucha ọnụ gị ma hichaa ezé gị ka nkịtị. Ị ga-ahụ ụfọdụ nsonaazụ mgbe ụbọchị ole na ole.
Gị dọkịta ezé nwere ike ịgwa gị nke home ezé kasị mma n'emebighị Enamel ma ọ bụ goms.
Asa ezé gị anya ma ọ bụrụ na i nwere oké ọnụ ọchị. Food na ihe ndị ọzọ nwere ike iru on ezé gị na n'iku ha. Ị ga-enweghị ka ichegbuwe onwe banyere nha nha achagharị ma ọ bụrụ na ị na mgbe nile asa ezé gị.
Mmiri bụ ihe dị oké mkpa ngwá ọrụ na-alụso stains. Ọ na-enyere gị aka ma itucha anya ezé gị nakwa dị ka gbochie staining. Ọ bụ ezigbo ahụ ike omume na-gị na mmiri oriri ruo ụbọchị ọ bụla, karịsịa mgbe ọ bụla nri.
Ịnọgide na-enwe whiteness ezé gị, aga dọkịta ezé mgbe nile n'ihi na a dị ọcha na a na ego elu bụ kwesịrị. Inwe mgbe niile bụ oké ụzọ na-gị na ezé na-acha ọcha. Ị kwesịrị ị na-eleta gị dọkịta ezé dịkarịa ala ọ bụla ọnwa isii.
Iji whitening ntacha eze bụ mfe ụzọ iji nweta ndị na pearly na-acha ọcha ezé na ị na-achọ. site esemokwu, a ntacha eze ga-ewepụ nke stains na ihe e dere ede. Oge n'aga, ị ga-enwe chawapụrụ ezé dị ka stains amalite na-apụ n'anya.
Nwụrụ peroxide ga bụghị a mma ọgwụgwọ maka whitening ezé. Ọ bụ nwedịrị ike ịta na nwere ike ime ka ezé gị discolored; ị nwekwara ike ejedebe na abụọ dị iche iche acha ezé. Zere ihe ọ bụla ngwaahịa na nwere hydrogen peroxide.
Enamel bụ a oyi akwa nke mineral na-echebe ịnweta oyi akwa-enyere aka igbochi mgbọrọgwụ na-efe efe dị ka nke ọma dị ka ihe ndị ọzọ nwere ike imerụ ezé. Ụfọdụ nha nha whitening na ngwaahịa nwere ike isi ezighị emetụta whiteness ezé gị.
Ọ bụrụ na ị abọ na floss ezé gị ugboro abụọ n'ụbọchị, ị ga-enwe acha ọcha ezé tụnyere ndị na-adịghị eme nke a mgbe. Iji ndị a ụzọ ga-ewepụ buildup nke ihe e dere ede nke discolors ezé gị. Ọ bụ ezi echiche iji asa ezé gị na-floss mgbe ọ bụla nri.
Ị ga-belata gị kọfị na a acha ọcha smile.As ike dị ka nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ọtụtụ ndị, kọfị bụ a na-akpata discolored na ezé mgbachu. -Agbalị na-aṅụ na-ekpo ọkụ chocolate kama ịṅụ kọfị.
The citrus na lemon na wayo ihe ọṅụṅụ nwere ike whiten ezé gị n'ụzọ dị irè bụ otu agadi nwunye akụkọ. Ọ bụ ezi echiche na-anọ kpamkpam n'ebe usoro a nke ọgwụgwọ.
Unu mara na ọ bụla enwu gbaa ngwọta na-arụ ọrụ na eke ezé. Ọ bụla aka wuru na-ebupụta, gụnyere okpueze, bonding, implants na ihe ndị yiri gaghị gbanwere na agba. Iji ezé whiteners nwere ike ime ka eze na-arụ ọrụ, dị ka okpueze, na-eguzo na-emegide gị eke acha ọcha ezé.
Ị ga-enwe ahụ ike na acha ọcha ezé on a isi ihicha eme mgbe nile na ntacha eze na flossing. Ngwaahịa nwere mmiri soda ndị dị irè na wepụ stains dị ka ị floss na flossing.
Citrus mkpụrụ osisi nwere ike dị ukwuu acid maka gị teeth.You kwesịkwara zere citrus juices dị ka nke ọma. The asịd dị na egwu n'ihi ezé gị. Ị na-achọ izere na-eri nri ndị a n'ihu gị dina ala n'abalị, n'ihi na ha mee ka ị ndị ọzọ yiri ka-ata ahụhụ site acid reflux, nke nwekwara ike imebi gị ezé.
Ọ bụrụ na i nwere mmasị na whitening ezé gị, ịgwa gị dọkịta ezé mbụ. Whitening ị ezé Chineke adịghị mfe ịchọ mma ọrụ. Gaa gị ụlọ mgbe nile iji jide n'aka na ezé gị na-ahụ ike. Jide n'aka na-ekwu okwu ka a dọkịta ezé banyere a ezé whitening Usoro.
Eme ka a powder site egweri ọnụ oroma peels na n'ọnụ mmiri epupụta. Nke a ntụ ntụ nwere ike a n'ọrụ gị atu na uche.
Adịghị whiten ezé gị ma ọ bụrụ na i nwere bụrụ na e wepụghị eze nsogbu dị ka cavities.Make n'aka na ịkpọ gị dọkịta ezé tupu a malite bụla n'ụlọ whitening usoro kwesịrị ekwesị maka gị.
-Adịghị atụkwasị obi toothpastes na-ekwu na ha ga-enye gị acha ọcha ezé. Ọtụtụ ubé whiten ezé gị, ma ọ bụrụ na mgbe nile, ma i nwere ike iji ndị ọzọ na ngwaahịa ma ọ bụrụ na ị chọrọ acha ọcha ezé. Ọ bụrụ na ị na-eme ịzụta a whitening ntacha eze, ịzụta otu na e dere mmiri soda, dị ka ọ na-nwere ike inyere.
Dị ka e kwuru n'ihu, e nwere ọtụtụ ndị dị iche iche na-achọ inwe acha ọcha ezé. Ọtụtụ dị iche iche na azum nwere ike tinye n'ọrụ n'ihi na whitening ezé gị na iwepu odo stains. Ezé gị ike dị ọcha dị ka o kwere ma ọ bụrụ na ị nanị iji ozi ahụ n'ihu ebe a.
Categories: Home Dabere na whiten Ezé Tags: Bright White Ọchị, Obi ike Na Ezé Gị, ọnụ ọchị, -acha ọcha ezé